Ngwa pụrụ iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ngwa pụrụ iche
Akụkụ nke ịkụ na ilekọta hydrangea n'ụlọ
Hydrangea (ma ọ bụ hydsara ime ụlọ) bụ ifuru mara mma nke dabara na ntinye ọ bụla. Mana hydrangea nwekwara ike itolite na windill gị na ite. Okpokoro dika osisi ga-enwe mmetụta bara uru n'omume na ikuku n'ime ulo. Hydrangea dị n'ime ụlọ bụ osisi shrimp nke osisi na ọtụtụ afọ, akwụkwọ ya bụ akwa dịka 15 cm.
Mee onwe gi snow snow: ihe, imewe, n'ichepụta ihe
Ihe na-eme ka snow na-ewepụ ihe dị iche iche na-ewu ewu n'etiti ndị okpomọkụ na ndị bi n'ime obodo ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na onye ọ bụla nwe mpaghara dacha na-eche nsogbu nke iwepụ snow na oyi. N'ezie, a ga-eme nke a na aka, jiri shọvel, ma ọ ga-ewe oge dị ukwuu ma chọọ mgbalị anụ ahụ.
Otu esi choputa ahihia iji nye: ụdị nke lawnmowers, ụdị ndị a ma ama, nhọpụta nhọrọ
N'ọtụtụ mba na-aga n'ihu nke Old World, a na-ekwu na ọnụ ọgụgụ nke ahịhịa ndị dị mma nwere ike ịsị na ọ bụ naanị ndị na-egbu oge ruo afọ 200. N'oge a, ọ na-esiri ike ikwenye na onye ọ bụla nwe ụlọ ga-eji oge dị otú ahụ bara uru. Nke a abụghị ihe mgbagwoju anya, n'ihi na iji nlezianya na-elekọta, nnukwu ikuku na nke na-ekpo ọkụ na-egosi nanị otu afọ mgbe ịchọtachara.
Ngwongwo osisi: otu esi eji aka aka gi kpoo aka olu
Onye ọ bụla ga-eji aka ya na-eme ka ígwè ọrụ ya dị mma. A sị ka e kwuwe, e nwere ọnọdụ mgbe enweghị ebe ichere maka enyemaka n'okwu a: kpọọ nna ukwu ukwu, ma ọ bụ jeere ya aka. Na nke a, ị ga-achọ ka anyị kwadoro na ịkụnye chainsaw ịke. Ihe dị mkpa maka ịkụzi chainsaw, otu esi aghọta na agbụ ahụ aghọwo ọhụụ Ịhụ nkwa maka ọrụ ogologo nke igwe gị bụ ndozi kwesịrị ekwesị maka ya.
Chainsaw igwe nkọ: ụkpụrụ nke ọrụ, ụdị, ndụmọdụ na ịhọrọ
The chiansaw - ihe na-enweghị ike ịrụ ọrụ maka nhazi. A na eji ya maka igbutu Kporo, kwachaa osisi na osisi. Ime ihe siri ike nke ogwe aka nke ngwá ọrụ ahụ na-eduga na iyi ya. Iji weghachite ngwá ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ, ọ dị mkpa ka ị na-emepụta ígwè ndị na-emepụta ihe. Ngwa kachasị mfe maka nke a bụ ígwè ọrụ nkọsa nke chainsaw.
Eme-ya-onwe gị lawnmower idozi: isi ihe kpatara nsogbu na mkpochapu ha
Ndị nwere oghere ndị mara mma ma na-acha akwụkwọ ndụ na-eji mpempe ahịhịa nwere ike ịdaba na nsogbu mgbe ha na-arụ ọrụ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi edozi mmanụ ọkụ mmanụ ụgbọala na aka gị, yana ị ga-amụta ihe kpatara nsogbu nke ngwaọrụ a. Njirimara nke ọdịdị nke ọkụ ọkụkụ A na-achịkwa ọtụtụ mowers site n'ịkpụ azụ, ma e nwekwara ụdị ndị a ga-ejikwa na-eji stere ụkwụ.
Ịwụnye ígwè na chainsaw, otu esi ese nrụrụ aka ma chọpụta esemokwu ahụ
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ akawụ n'ụlọ, ị kwesịrị ịmara na a chọrọ nlekọta pụrụ iche maka ya. Ọ dị mkpa ịdị ọcha mgbe niile ma mee ka agbụ ahụ dị ọcha, iji kpochapụ ntụ ntụ, mmanụ na taya. Ma, n'ezie, ịkwesịrị ileba anya na esemokwu nke eserese, dị ka enwere obi erughị ala ọ nwere ihe ize ndụ ọ bụghị naanị imerụ ahụ ahụ, kamakwa ahụike gị ma ọ bụrụ na agbụ dị elu na-efe.
Kedu ihe bụ ubi: atụmatụ na nzube nke ngwaọrụ ahụ
Iji nweta ezi owuwe ihe ubi, ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ dị mma maka osisi na ala. Ụwa ga-ebu nri na ikuku oxygen. Iji mee nke a, na-arụ ọrụ ubi site n'enyemaka nke ubi. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe a na-akọ ubi, na ụdị ụdị ya ka a na-ejikarị eme ihe. Nkọwa nke ngwaọrụ Ngwá ọrụ bụ ọrụ ugbo nke eji eji akọ ala.
Otu esi choputa oji nke snow iji nye, ntuziaka na usoro
Na mmalite nke ezigbo oge oyi, ka ụmụaka na-atọ ụtọ, ugwu snow na-apụta n'okporo ámá anyị. Ma ọ bụghị maka oge oyi oyi na ọṅụ. Na-echegbu onwe ya banyere mbipụta nke ụlọ obibi ndị na-ekpochapụ snow na ụlọ ndị mmadụ. Ihe ndị dị mkpa dịka shọvel dị ezigbo mkpa, ma ọ bụ ihe dị mfe iji usoro nke oge a.
MTZ-892: njirimara na njirimara nke traktọ
Taa, ọrụ ugbo dị oke ọkwa na ọ dịbeghị ike ime n'emeghị ka ngwá ọrụ pụrụ iche. Ndị kachasị ewu ewu bụ traktọ dị iche iche, nke a pụrụ iji ma maka otu ụdị ọrụ, n'otu oge maka ọtụtụ. Ka anyị tụlee nkọwa nke traktọ ụwa MTZ nlereanya 892, atụmatụ ya.
Mgbanwe nke ụlọ na mowers maka motoblock na-eme ya onwe gị
N'ọrụ ugbo, anyi na ejikari ahihia ndi ozo. N'okwu anyị, anyị ga-agwa gị ụdị ngwá ọrụ na otu esi eme igwe n'onwe gị. Atụmatụ atụmatụ Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ụlọ ma ọ bụ ụlọ ezumike, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị ịnagide ahihia, ahịhịa na osisi ndị na-enweghị isi.
Isi ọrụ na njirimara nke bulldozer T-170
N'isiokwu a, anyị ga-amụ banyere ngwá ọrụ ndị dị arọ, nke a na-akpọ "kpochapụ" nke ihe owuwu na nke ụwa, akụkọ banyere ụlọ ọrụ Soviet, nke bụ, T-170 bulldozer. Nkọwa na mgbanwe nke traktọ ụlọ ọrụ T-170 bulldozer bụ ụlọ ọrụ Soviet na ụgbọ ala ụlọ ọrụ, nke e mere site na ịkwalite traktọ T-130.
Nchịkọta maka ịhọrọ mmanụ ọkụ eletrik, otu esi họrọ onye inyeaka inye
Akụkụ a bụ banyere ụdị ọrụ dị otú a na-ewu ewu n'etiti ndị okpomọkụ na ndị nwe ụlọ dị iche iche dị ka ọkụ ọkụ. Ha dị ugbu a buru oke ibu, ya mere anyị na-edozi ma kọwaa ihe ọmụma niile. Anyị na-echebara gị echiche ụdị ntụziaka maka nhọrọ nke usoro a.
Ebube Spade-Foto: Ọrụ na Uru nke Iji Ngwa Ngwaọrụ
Oge ịkọ ugbo malitere site na-egwu ala. Na-enweghị ihe na shọvel na ejikere ịrụ ọrụ a agaghị ekwe omume. Ọtụtụ mgbe, ọrụ na saịtị ahụ na-esote ya na nrịghachi azụ na nrụsi ike. Ma, taa, mmemme ndị ọhụrụ na-eme ka belata ọrụ na-agba ọsọ. Ngwá ọrụ kachasị mkpa nke onye ọ bụla na-elekọta ubi ga-enwe bụ ọkpụkpụ Mole. "
Obere traktọ maka ụlọ: nhazi ọrụ "Uraltsa-220"
Ndị ọrụ nke Uralets ika bụ obere traktị nke China na Russia rụrụ. A na-eji ngwá ọrụ ndị ahụ eme ihe na obodo na ọrụ ugbo maka iji ụlọ na njem njem. Nkọwapụta Nkeji Ukarats-220 mini traktọ bụ ihe nlereanya kachasị n'usoro n'usoro (enwere Uralets-160 na Uralets-180 mini tractors).
Kedu ihe MTZ 320 ga-arụ ọrụ ugbo?
Taa, traktị juru ebe nile, n'agbanyeghị oke ma ọ bụ itinye n'ọrụ na ọrụ dị iche iche. Otu n'ime ndị nnọchianya kachasị elu bụ MTZ 320 traktọ, nke sitere na ígwè ọrụ ụgbọ elu nke igwe n'ụgbọelu. MTZ 320: nkọwa dị mkpirikpi nke "Belarus" nwere wiil a na-akpọ 4x4 ma tinye ya na klas nke ụlọnga 0.6.
Ịhọrọ eletrik eletrik
Ulo okoko osisi na-acha mma ma ọ bụ nke ọma bụ ihe mma nke ogige ọ bụla na ubi. Ntucha ahihia nke oma na nke oma bu oge na-ewe oge, ya mere oganihu na-abia iji zoputa ndi mmadu site n'inye anyi otutu ihe ndi ozo. Ọ na-anọgide na-achọpụta onye n'ime ha - ịhọrọ awning, motokosa ma ọ bụ trimmer.
Vladimir Tractor Osisi: nkọwa na foto nke traktọ T-30
N'ihi oge nke oge na ihe a na-apụghị izere ezere nke traktọ T-25 ahụ, onye ndu nke Vladimir Tractor Plant kpebiri ịkwụsị mmepụta nke ụdị T-25 ma malite usoro ọhụụ nke ịmepụta ihe nlereanya T-30 ka njọ. "Vladimirets" T-30 Taya traktọ T-30 bụ ngwaọrụ jupụtara na ya, n'adịghị ka igwe ndị ọzọ nke klas ya, igwe.
Ịchọpụta nke ọma na obere traktọ "Belarus-132n": njirimara na nkọwa
Na mmalite nke oge opupu ihe ubi, onye ọrụ ugbo ọ bụla na-eme ka ụba ọrụ dị n'ubi na-amụba. A ghaghị ịkụ ala, a ghaghị ịme nri, a ghaghịkwa ichezọ onye ọzọ banyere ịhazi poteto. Iji kwado mmezu nke ọrụ dị otú a n'ọhịa nwere ike ịnweta igwe MTZ "Belarus-132n" - igwe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dịgasị iche iche n'elu ala.
Otu esi achọputa onye na-acho moto, ego ma nwee ntukwasi obi
Владельцы больших участков часто присматриваются к "малой механизации". Usoro a dị mma maka ikpe mgbe nhazi akwụkwọ na-adị arọ, onye traktọ ahụ ka nọkwa na saịtị ahụ. N'ezie, Achọrọ m ụdị ihe ndị a iji kpuchie ọtụtụ ụdị ọrụ. Anyị na-amụtakwu banyere otu esi ahọrọ onye na-azụlite ọkụ maka nnukwu ụlọ obodo.
Esi eji aka aka mee ka nduku nduku
Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ala ala ya maara otú o siri sie ike ịkụ nduku. Iji kwado usoro a, e mepụtara ngwaọrụ dị ka osisi nduku. Nkọwa na ebumnuche nke owuwu A potato potato bụ ngwaọrụ nke na - ebelata iji ọrụ anụ ahụ siri ike maka ịkụ ihe nduku, n'ihi na o zuru ezu iji tinye ya na onye na - agagharị, jupụta tubers ahụ, ngwaọrụ ahụ ga - agbanyekwa n'ime mmiri ahụ, dina ha ma fesaa ya na ala, Echefukwala iji mepụta ihe oriri.
Kedu ka esi eto tomato "Golden Heart": iwu maka ịkụ mkpụrụ osisi ma na-elekọta ubi
Ihe niile dị mkpa ka ị mara iji raspberries Yellow Yellow
Nzọụkwụ na-eduzi nzọụkwụ: otu esi egbutu ụlọ elu? Nuances nke usoro na atụmatụ nke nlekọta ụlọ
Kedu ihe bụ Mason's begonia, ụdị nlekọta ọ chọrọ, olee otú o si mụbaa na lee foto ahụ?
Otu esi elekọta tii
Ọ ga-ekwe omume iji ifuru mmiri na-eme nri